Waa sidee Xaalada deegaanada Waqooyiga Muqdisho iyo Ciidamo wali isku uruursanaya (Warbixin)
Inkastoo Shabaabka ay baneeyeen meelo badan oo ka mid ah Magaalada Muqdisho ayaa hadana waxaa la soo sheegayaa inay jiraan inay wali joogaan qeybo ka mid ah magaalada, gaar ahaan deegaanada Waqooyi.
Ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa AMISOM ayaan wali gudaha u gelin degmooyinka qaar, sida degmooyinka Shibis iyo C/casiis oo si rasmi u faarujiyeen, iyo qeybo ka mid ah degmada Kaaraan.
Laakiin hadal heynta 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa aheyd Ciidamo deegaan ahaan ka soo jeeday oo isku uruursanayay degmada Yaaqshiid, kuwaasoo meelaha qaar sidooda u jooga difaacyo ka galay.
Isku day shalay Ciidamada Dowladda KMG ku doonayeen inay ku gaaraan Isgoyska Sanca ayaa dhicisoobay, kadib markii iska hor imaad lagala hor-yimid, waxaana Ciidamada oo ah kuwo hab beeleed u abaabulan ay isku xiran yihiin min Sanca ilaa Hotelkii Ramadaan.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay socdaan wada hadalo ku aadan sidii Ciidamadaas isku soo dhiibi lahaayeen, inkastoo wali shaki badan uu ka jiro qaabka is dhiibitaanka, waxaana warar kale tibaaxayaan in Ciidamadan ay ku tala galeen inay dagaalamaan.
Ciidamadan oo lagu qiyaasay ilaa shan boqol, kuna hubeysan 19-gaadiidka dagaalka ayaa ku kala sugan Xaafadaha Juungal, Isgoyska Fagax, agagaarka Hotel Lafweyn, Dugsigii Maxamed Axcmed Cali, Saldhiga Yaaqshiid iyo Hotelkii Ramadaan, halkaasoo ay difaacyo xoogan dhigteen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Ciidamadan uu hogaaminayo Suudi Axmed Jiis oo ka mid ahaa Ganacsatadii maamuli jirtay Dekeda macmalka aheyd ee Ceel-Macaan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidamadan oo badan kuwii Xisbul Islaam ee deegaanada dhinaca Waqooyi ka soo jeeday ay ku xiran yihiin Ciidamo kale oo qeybo ka mid ah degmada Huriwaa ku sugan, gaar ahaan Ex-Koontarool Balcad, Warshadii Barafuunka ilaa Saldhiga Huriwaa kuwaasoo si toos u hoos taga Xasan Dahir Aweys.
Xildhibaanada Baarlamaanka kuwooda ka soo jeeda Beelaha Mudullood ayaa wada dadaalo ku aadan sidii Ciidamada deegaanada Waqooyi ka soo jeeda ay si nabdoon isugu soo dhiibi lahaayeen, waxaana wada hadalada ay yihiin kuwo si xowli ah u socda.
Xukuumada Soomaaliya ayaa shalay codsi u jeedisay dhalinyarada Shabaab inay si xushmad ah leh u soo dhoweyneyso hadii ay isku soo dhiibaan, iyadoo Dowladda u balanqaaday inay nabadgeli doonaan xerooyin lagu xareyn doono, si lagu dhaqan celiyo.